भ्रूणमै मुटुको जाँच : इकोकार्डियोग्राफी प्रभावकारी बन्दै – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
भ्रूणमै मुटुको जाँच : इकोकार्डियोग्राफी प्रभावकारी बन्दै
२०७६ पुष ९, बुधबार ०८:५१ गते
भरतपुर । गर्भको भ्रूण इकोकार्डियोग्राफी चितवनमा पनि प्रभावकारी बन्दै गएको छ । भू्रणको मुटुको जाँच (भ्रूण इकोकार्डियोग्राफी) सुरू भएको केही महिनामै यसको प्रभावकारिता देखिएको सम्बन्धित चिकित्सकको भनाइ छ । एक अल्ट्रा साउन्डजस्तै परीक्षण हो ।
गर्भमै रहेको बच्चाको मुटुको संरचना र गतिविधि हेर्नका लागि गरिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भित्रिएको यो नौलो निदानात्मक पद्धति हो ।
‘चितवनमा पनि केही महिनादेखि यो सेवा सुरू भएको छ’, कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट रहेका डा. सन्दीप गर्गले भने, ‘सबैमा यो परीक्षण आवश्यक छैन, सम्भावित देखिएमा मात्रै यसको जाँच गरिन्छ ।’
यो सामान्यतया गर्भावस्थाको १८ देखि २२ हप्तामा गरिन्छ । यो परीक्षण रेडियोलोजिस्ट बाल हृदयरोग विशेषज्ञ र भ्रूण चिकित्सा विज्ञहरुबाट गरिन्छ । गर्भमा रहेको बच्चाको मुटुरोग पत्ता लागेमा सम्बन्धित सबै सावधानी अपनाई सुविधासम्पन्न अस्पतालहरुमा जन्माउन सकिने र तत्कालै बच्चाको मुटुको उपचार सुरू गर्न सकिने भएकाले यो उपचार प्रभावकारी बनेको चिकित्सकको भनाइ छ ।
नेपालमा यो परीक्षण नियमितरुपमा काठमाडौँस्थित सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमा गरिन्छ । चितवन ओम अस्पतालमा कार्यरत डा. गर्गले उपकरण उपलब्ध भएमा दक्ष चिकित्सकबाट अरु अस्पतालमा पनि सेवा सुरू गर्न सकिने बताए ।
परीक्षण बच्चा र आमा दुवैका लागि सुरक्षित रहेको चिकित्सकको भनाइ छ । यसबाट कुनै विकिरण प्रयोग नहुने भएकाले पनि सुरक्षित भएको हो । सबै गर्भवतीलाई यो जाँच आवश्यक नरहेको भन्दै डा. गर्गले भने, ‘गर्भमा रहेको बच्चालाई मुटुरोगको उच्च जोखिम भएमा यो जाँच आवश्यक छ ।’
अन्य अवस्थाहरुमा परिवारमा अरु सदस्यलाई मुटुरोग भएमा अघिल्लो बच्चामा मुटुरोग देखिएमा, गर्भावस्थामा आमाले लागू पदार्थ वा मदिरा सेवन गरेमा, यदि आमाले मुटुरोग निम्त्याउन सक्ने औषधिको प्रयोग गरेमा, मधुमेह, रूबेला, लुपुसजस्ता रोग लागेमा जाँच आवश्यक रहेको डा. गर्गले बताए ।
यो परीक्षण समान्यतया पेटबाट गरिन्छ । कहिलेकाहीँ योनिबाट इकोकार्डियोग्रामसमेत गर्ने गरिएको छ । योनिमार्गबाट धेरैजसो गर्भावस्थाको पहिलो चौमासिक अवधिमा गरिने उनको भनाइ छ ।
उपकरण परीक्षणको गुणस्तर र प्रविधिको आधारमा भू्रण इकोकार्डियोग्राफी ९६ प्रतिशतसम्म विश्वसनीय हुने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । भ्रूण इकोबाट धेरैजसो मुटुको रोेग पत्ता लगाउन सके पनि केही रोगहरु अझै पत्ता लगाउन नसकिने डा. गर्गले बताए । हालसालै विकसित देशहरुमा आमाको गर्भमा नै भ्रूणको मुटुको शल्यक्रिया गरिन थालिएको छ, तसर्थ भ्रूण इकोको मह¤व झन् बढेको छ ।